Mari-nehupfumi, 15 Ndira 2019
Chipiri 15 Ndira 2019
Ndira 15, 2019
ZLHR Yoendesa Hurumende kuMatare eDzimhosva
Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti inoda kuti dare redzimhosva repamusoro soro riudze mapurisa kuti asatadzise magweta esangano iri kuita basa rawo rekumirira vanhu vari kusungwa nemapurisa mumhirizhonga iri kuitika muZimbabwe.
Zimbabwe Council of Churches Inokurudzira Hurumende Kuti Isapfura Vanhu Vanoratidzira
Sangano reZimbabwe Council of Churches, ZCC, rinoti mauto nemapurisa haafanirwe kunge achipfura vanhu panguva iyo anenge achiedza kupedza mhirizhonga iri munyika.
Mabhizimisi Orasikirwa neMamiriyoni Mashanu eMadhora paZuva neNyaya yeKuratidzira
Sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce rinoti mumazuva maviri ekuratidzira nyika yarasikirwa nemari inodarika mamiriyoni gumi. Apa hapana mari yezvitoro zvakavharwa kana kupwanya mukuratidzira uku.
Ndira 14, 2019
Mutongi Mukuru weMatare Okurudzira Kuremekedzwa kweMatare
Mukuru wevatongi vedzimhosva munyika, Chief Justice Luke Malaba, nhasi vaparura kushanda kwematare zviri pamutemo gore rino vachiti vanhu vanokwidza nyaya dzavo kumatare neveruzhinji vanofanira kuremekedza mitongo yematare zvisinei nekuti inovafadza here kana kuti kwete.
Zvinhu Zvoramba Zvakaita Manyama Amire neRongo muHarare
Zvinhu muHarare nhasi zvange zvakaita manyama amire nerongo vanhu vachiratidzira mushure mekunge mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vazivisa kuti mutengo wemafuta wainge wawedzerwa nezvikamu zvinodarika zana nemakumi mashanu nemusi weMugovera.
NPF Inoti VaMnangagwa Ngavasiye Chigaro
Bato rinopikisa reNational Patriotic Front kana kuti NPF rakutudzira mutungamiri wenyikaVaEmmerson Mnangagwa kuti vasiye chigaro richiti zviri pachena kuti vakundikana kutungamira nyika.
Vana Chiremba Vashora Kushandiswa Kwemabara Pavanhu Vari Kuratidzira
Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu, reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, ZADHR, rashora zvikuru hurumende mukushandisa kwayo mabara mukuedza kumisa vanhu varikuratidzira.
Vanhu VemuBulawayo Voratidzira Zvine Mutsindo
Mapurisa muBulawayo ashandisa hutsi hunokachidza kuti adzinge vanhu vange vachiratidzira muguta iri.
ZCTU Yokurudzira Vashandi Kuti Vasaenda Kumabasa Kutanga Muvhuro
Mutungamiri weZCTU, VaPeter Mutasa, vanoti zvichitevera tsvakurudzo yavakaita kubva kune mapoka akasiyanasiyana, vakaona zvakakodzera kuti vakurudzirire vanhu kuti vasaenda kumabasa kwemazuva matatu.
Kukwidzwa kweMafuta eKufambisa Kworwadza Vagari muChinhoyi
Vagari vemuChinhoyi vanoti havasi kufara nemakwidzirwo ari kuita mari dzekufambisa kuenda kunzvimbo dzakasiyana apo zvitoro zvakawanda zvainge zvakavharwa neSvondo.
Ndira 13, 2019
MDC Inoshoropodza kuKwidzwa kweMutengo weMafuta Ichiti Zvichaomesera Veruzhinji
Mutungamiri wenyika VaMnangagwa neMugovera manheru vakazivisa nyika kuti mafuta ekufambisa dzimotokari kutanga neSvondo anenge ave kuwanikwa nenemutengo unoti $3.11 kubva pa$1.32 parita repeturu, ne$3.31 kubva pa$1.38 parita redhiziri.
Veruzhinji vonyunyuta neKukwidzwa kweMutengo weMafuta eKufambisa
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa neMugovera vakazisivisa kuti peturu yave kutengwa nemadhora matatu nemasendi makumi matatu nerimwe parita, ukuwo dhiziri rave kutengwa nemadhora matatu ane masendi gumi nerimwe chete parita.